Tombony 4 amin'ny dingam-pamokarana sarimihetsika lamba 3M mazava boaty
3M dia orinasa manerantany izay manome vokatra marobe ho an'ny indostrian'ny dokam-barotra sy ny sonia. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia, maro ireo orinasa fanta-daza eran'izao tontolo izao amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Ity manaraka ity dia fampidirana ireo tombony efatra amin'ny boaty fahazavana 3M ...
1. Fomba fametahana maina amin'ny fomba fametrahana lamba boaty mazava Raha ny tena izy dia ny mametaka mivantana ilay horonan-tsary amin'ilay fitaovana nopetahana, mametaka paty maina, manaparitaka kilasy ary sary mihetsika manify manify hafa. Soso-kevitra ny hametahana sosona taratasy fametrahana toerana manokana eo amboniny. Aza triatra ...
Ho an'ireo namana te hanao takelaka lamba boaty maivana 3M, ny tena manahirana dia ny vidiny, ohatrinona ny iray metatra toradroa, raha mihoatra ny teti-bolany, na raha tsara ny kalitao dia mila misalasala izy ireo mampiasa azy. Na izany aza, raha diso ny anontanianao, izay mitarika amin'ny fandaozana ny fampiasana fitaovana 3M ...